China epurasitiki kurongedza bhegi Vagadziri & Vatengesi - China Dhizaina kurongedza bhegi Fekitori
Chikafu Vacuum Seal Roll 10- X 50'- 2 kuverenga
Maitiro: 1. Uchishandisa Premium PA / PE zvinhu uye epamberi tekinoroji michina. PA / PE Raw zvigadzirwa: Matatu-euchapupu tekinoroji inomira kubva pamatanho mashanu akasimba tembiricha yekumanikidza yekugara-kwenguva yakareba, yepakati nylon zvidimbu (PA) zvinodzivirira mweya unotonhorera nemvura kuti zvisapinda muhomwe yekumanikidza. Puncture-resistant nylon nyoro zvinhu: Nylon simba rekusimba uye simba rekumanikidza rinochinja netembiricha uye inogona kuita firiji uye nechando, ine yakasimba tembiricha kuramba. 2. Teerera pamwe ne ...
Kubatanidza akanakisa maficha eQuad Seal uye Simuka Homwe, Iyo Flat Pazasi Bhegi (inozivikanwawo seBhokisi Homwe) ine yakakwira shefu kukwirira, uku ichiwedzera zvese masherufu uye kurongedza nzvimbo nekatoni-dhizaini yakadzika pasi gusset. Flat Pazasi Mabhegi anotendera nyore kumusoro kuzadza uye inokodzera dzakasiyana siyana musika kunyorera, kubva kugungwa, kofi, uye muesli, kuburikidza nekudya kwechipfuwo uye zvigadzirwa zvekurima. Zvimiro zveFlat Pasi Bhegi Yakasimba yakasimba lamination inopa yakaenzana kuomarara kune akakwana kuzvimiririra-kumira ...
Kubatanidza akanakisa maficha eQuad Seal uye Simuka Homwe, Iyo Flat Pazasi Bhegi (inozivikanwawo seBhokisi Homwe) ine yakakwira shefu kukwirira, uku ichiwedzera zvese masherufu uye kurongedza nzvimbo nekatoni-dhizaini yakadzika pasi gusset. Flat Pazasi Mabhegi anotendera nyore kumusoro kuzadza uye inokodzera dzakasiyana siyana musika kunyorera, kubva kugungwa, kofi, uye muesli, kuburikidza nekudya kwechipfuwo uye zvigadzirwa zvekurima. Zvimiro zveFlat Pazasi & Simuka Bhegi Yakasimba yakasimba lamination inopa yakanyanya kuomarara kune akakwana ...
Kubatanidza akanakisa maficha eQuad Seal uye Simuka Homwe, Iyo Kraft Pepa Flat Pazasi Bhegi (inozivikanwawo seBhokisi Homwe) ine yakakwira shefu kukwirira, uku ichiwedzera zvese masherufu uye kurongedza nzvimbo nekatoni-dhizaini yakadzika pasi gusset. Flat Pazasi Mabhegi anotendera nyore kumusoro kuzadza uye inokodzera dzakasiyana siyana musika kunyorera, kubva kugungwa, kofi, uye muesli, kuburikidza nekudya kwechipfuwo uye zvigadzirwa zvekurima. Zvimiro zve Kraft Pepa Flat Pazasi Bhegi Yakasimba yakasimba lamination inopa yakanyanya kuomarara kune ...
HONGBANG yakagovera mhando yepamusoro tsika yakadhindwa mupumburu wepurasitiki zvigadzirwa kune vatengi muEurope neAmerica kweanopfuura makore makumi maviri. Iyo inopa akasiyana siyana akasiyana siyana eanodzivirira epurasitiki laminated firimu. Mazhinji ezvigadzirwa zvemufirimu anoshandiswa pakushambadzira chikafu uye mamwe ese anoenda kune akakosha maficha. Isu tinopa mhinduro dzemusango renji yezvipingamupinyi zvemufirimu. Huwandu hwekugona kumisikidzwa kweyeyedu-yakaturikidzana firimu haina kukwana. Kunyangwe ...
Mazuva ano, kudzikisira hutachiona inova nyaya yakakosha, saka fekitori yedu inopinda muhondo nenyika. Isu tinopa tsika kumeso kumeso kurongedza kwepurasitiki mabhegi ane marogo, ayo anodzivirira kumeso kwako kumeso kubva kune zvese zvinokuvadza zvinokuvadza uye kuwedzera nguva yekuchengetedza. Mapurasitiki epurasitiki ane zipi kana yekuzvinamatira tepi kumusoro. Izvi zvinoita kuti kumeso kumeso kuve nyore uye kushandisa mushandisi. Paketi inosanganisira 1-20 kana kupfuura masiki echiso. Isu tinogadzira kuraswa maski kurongedza bhegi uye maishandiswazve ma ...
Mhepo Column Bhegi rekushandisa Fregile Chigadzirwa uye ita kukuvara kwemaharaConventional upamhi hwemhepo ikholamu roll ndeye 2 cm, 3 cm Iyo yakafara yemhepo chikamu, iine nani cushioning mhedzisiro. Asi inonyanya kushandiswa ndeye 3 cm ikholamu upamhi. Ukobvu zvakare une 7um, iwo mukobvu akasimba ane dziviriro iri nani futi. Kana iwe uchida kugadzirisa, ndapota taura nesu kuti tikurukure. Izvo zvinogona zvakare kubvarura kana kucheka, kuda kurongedza zvinhu zviri panjodzi, senge girazi rehunyanzvi, kuburitsa pachena, waini tsvuku, porcelain, chaiyo zviridzwa, nezvimwe.